65L chena Rotomolded Ice Box
45L Nzvimbo Boxes
Product Features munhu: High simba uye kusimba, hunogara B: Mumwe-danho Kuumbwa kuti miviri-decker, zvakanaka chisimbiso, inogutsa kuputira pfuma c: (Puri) furo kuputira jekiseni kuchengeta tembiricha d: Mhandara zvinhu MDPE anogona kushandisa zvakananga chikafu E : husingakwanisi ultraviolet chiedza (UV), fadeless Range pamusoro Application yakatinakira chando cheni manyoro chikafu, mushonga uye mishonga. Very zvakanaka midziyo kushandiswa panze yokufaranuka uye mabasa akadai, hove, musasa etc., All marudzi TR ...
Product Features Zvinhu chikafu Pe mugiredhi sezvo mbishi zvinhu, mumwe-danho Kuumbwa kuti miviri-decker midziyo inogona zvakakwana kushanda pasi -40 ℃. Acid uye alkali nemishonga, yakaoma uye hunogara. Nyore noruoko ruoko nhovo Jack kubva kumativi maviri uye noruoko forklift rori kubva kumativi ose mana, stackable. Range pamusoro Application rimwe: Food kugadzirwa. B: Raw zvinhu chando okuchengetera. d: Low tembiricha inotonhora okuchengetera turnover. d: Low tembiricha thawing pamusoro hwemvura zvinhu uye nyama zvigadzirwa. E: Fresh uye two chilled refrigerate ...